Apple TV + dia namoaka ny lahateny ofisialy ho an'ny Charlie Brown Special: 'Ho an'i Auld Lang Syne' | Avy amin'ny mac aho
Apple TV + dia namoaka tranofiara ofisialy ho an'ny Charlie Brown manokana: 'Ho an'i Auld Lang Syne'
Manuel Alonso | 30/11/2021 14:00 | Apple TV
Tonga eto ny Krismasy. Ok mbola miditra isika ny fihanaky ny cyberweek, fa tsy maintsy mieritreritra foana momba ny fanomezana, fety ary fianakaviana. Ho avy ny Krismasy, fotoana mahafinaritra izay tokony hifaliantsika rehetra, na dia misy antony mahatonga antsika ho matotra kokoa aza. Mba hampahatsiahivana antsika ny hatsaran'ny Krismasy, manana andian-namana mahafinaritra indrindra amin'ny Apple TV + rehetra isika. Charlie sy ny namany, ao anatin'ity tranofiara Krismasy ity izay vao navoakan'i Apple. Andrasana ny 10 desambra ny iray manontolo.
Ny tranofiara ofisialy vaovao amin'ny Peanuts manokana manaraka na fantatra kokoa amin'ny anarana hoe Charlie Brown, in Ho an'i Auld Lang Syne. Ny orinasa dia nanambara voalohany ny sarimihetsika Krismasy Apple tany am-boalohany tamin'ny Oktobra tamin'ity taona ity. Ankehitriny ny ananantsika dia ilay tranofiara fohy nefa mahery vaika. Afaka mahazo hevitra momba izay hitantsika amin'ity Krismasy manokana ity isika. Apple dia mamaritra ity fandrosoana ity ho:
Ho an'i Auld Lang Syne dia hitantara ny tantaran'ny andian-dahalo izay niaina Krismasy nampalahelo satria tsy afaka nanatrika an'i Bebe. Saingy misy fanantenana ho an'ny Taom-baovao. Nanapa-kevitra i Lucy fa hanao fety amin'ny taom-baovao tsara indrindra hatramin'izay. Amin'ny lafiny iray amin'ny vola madinika, Tapa-kevitra ny hanatanteraka farafaharatsiny iray amin'ireo fanapahan-kevitra noraisiny i Charlie Brown Alohan'ny hanombohan'ny famantaranandro amin'ny 12 sy ny taona vaovao.
Tsy izany no seho voalohany navoakan'i Apple tamin'ny Krismasy. Amin'ireo daty manan-danja izay hivorian'ny fianakaviana dia afaka mahita Stillwater isika, izay handefa ny fizarana Krismasy amin'ny zoma 3 Desambra 2021, amin'ny lohateny. Ny Lalana Hody ary avy eo Mihodina miaraka amin'i Otis.
Vonona amin'ny Krismasy feno Apple TV +? Efa fantatrao fa afaka misoratra anarana ianao isaky ny tianao a vidiny somary mifaninana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Apple TV + dia namoaka tranofiara ofisialy ho an'ny Charlie Brown manokana: 'Ho an'i Auld Lang Syne'
Nandao ny tetikasa Apple Car i Soonho Ahn ary nankany Volkswagen
Ny orinasa dia afaka manavao ny Mac amin'ny $ 30 isam-bolana